China Solar Panel Manufacturer na Nweta | Xinneng
Kemgbe ihe karịrị afọ 10, anyị amịpụtala ihe eji arụ ọrụ nke ọma ma wuo ya nke na-eme ka mbara igwe dị ire ere nke erela n’ụwa niile.
Anyị ogwe na-mere nke obi iko na elu ìhè transmittance, Eva, anyanwụ cell, backplane, aluminum alloy, nkwụsị Box, Silica jel.
Anyị na-ekwe nkwa ogwe anyị maka afọ 25.
Anyị na ngwaahịa na-exported na Europe, Middle East, Africa, South America na ndị ọzọ na Asia mba.
Mkpụrụ ndụ anyanwụ, nke a makwaara dị ka "igwe anyanwụ" ma ọ bụ "fotocells", bụ mpempe akwụkwọ semịlisọndụ fotoelectric na-eji ìhè anyanwụ ewepụta ọkụ eletrik ozugbo. Enweghi ike iji sel ndị n’enweghị ike iji ya rụọ ọrụ dịka ike. Dị ka isi iyi nke ike, a ga-ejikọrị ọtụtụ sel ndị otu ụyọkọ selụ, jikọta ha ọnụ ma jidesie ya ike n'ime mmiri.
A na-achịkọta ogwe ọkụ nke anyanwụ (nke a na-akpọkwa modulu nke anyanwụ) site na ọtụtụ mkpụrụ ndụ nke anyanwụ, nke bụ akụkụ bụ isi nke sistemụ ike anyanwụ na akụkụ kachasị mkpa nke sistemu ike anyanwụ.
Anyanwụ panel mejupụtara na ọrụ
(1) Igwe obi jụrụ: Ọrụ ya bụ ichedo isi ahụ nke ike (dị ka sel), na nhọrọ nke nnyefe ọkụ chọrọ: Mgbasa ọkụ ga-adị elu (n'ozuzu karịa 91%); super ọcha n'obi ọgwụgwọ.
(2) EVA: Ejikọtara ma dozie iko ahụ na-acha ọkụ na isi ahụ ike (cell).
(3) Mkpụrụ ndụ: Ọrụ bụ isi n’enye ọkụ eletrik.
(4) Backplane: Ọrụ, akara, insulating na waterproof.
(5) Aluminom alloy: chebe laminate, rụọ ọrụ ụfọdụ nke akara na ịkwado.
(6) Ogwe nkwụsị: kpuchido usoro ọgbọ ike niile ma rụọ ọrụ dị ka ebe nnyefe ugbu a.
(7) Silica gel: mmetụta akara
E kewara ogwe igwe anyị na monocrystalline silicon solar solar na polycrystalline silicon solar panels. Ọdịdị ntụgharị fotoelectric nke monocrystalline silicon solar panels dị elu karịa nke polycrystalline silicon solar panels. Enwere ike ịhazi volta na wattage nke ogwe igwe, ọ na-abụkarị site na 5watt ruo 300watt. A na-agbakọ ọnụahịa nke ogwe igwe site na watt.
Dị ogwe nke anyanwụ
Monocrystalline anyanwụ ogwe
Ọdịdị ntụgharị fotoelectric nke monocrystalline silicon solar panels bụ ihe dịka 15%, nke kachasị elu bụ 24%. Nke a bụ arụmọrụ ntụgharị fotoelectric kachasị elu nke ụdị mpempe akwụkwọ dị iche iche, mana ọnụahịa mmepụta buru ibu nke na enweghị ike iji ya ọtụtụ ebe. Iji. Ebe ọ bụ na a na-ejikarị monocrystalline silicon kpuchie ya na iko toughened na resin waterproof, ọ na-adịgide adịgide ma nwee ndụ ọrụ ruo afọ 15, yana ruo afọ 25.
Usoro mmepụta nke ogwe osisi mkpụrụ osisi nke polycrystalline silicon yiri nke monocrystalline silicon solar panels, mana arụmọrụ ntụgharị fotoelectric nke polycrystalline silicon solar panels ga-belatara nke ukwuu, yana arụmọrụ ntụgharị foto ya na-arụ ọrụ bụ ihe dịka 12% (na July 1, 2004) , Japan Sharp arụmọrụ bụ 14.8%. Ngwunye polysilicon kachasị elu n'ụwa kachasị elu). N'ihe banyere ọnụahịa mmepụta, ọ dị ọnụ ala karịa monocrystalline silicon solar panel, ihe ahụ dị mfe imepụta, ọ na-echekwa ike oriri, yana ọnụahịa mmepụta zuru oke, yabụ e mepụtara ya n'ọtụtụ buru ibu. Tụkwasị na nke ahụ, ndụ ọrụ nke polycrystalline silicon solar panels dị mkpụmkpụ karịa nke monocrystalline silicon solar panels. N'ihe banyere arụmọrụ ego, monocrystalline silicon solar panels dị ntakịrị mma.
Poly 60 sel niile
Ike kachasị na STC (Pmax)
Kacha arụ ọrụ voltaji (Vmp)
Rụ Ọrụ Kachasị Ugbu A (Imp)
Open Circuit voltaji (olu)
Short Circuit Ugbu (Isc)
Module na-arụ ọrụ
-40 Celsius ruo +85 Celsius
Oke Voltaji System
Oke Series fuuz Rating
Ọnọdụ Ule Nlereanya (STC)
lrradiance 1000 W / m 2, modulu okpomọkụ 25 ° C, AM = 1.5; Ndidi nke Pmax, Voc na Isc niile dị n'ime +/- 5%.
Mkpụrụ ndụ Mono 60
Ọnọdụ Ule Ọgwụ (STC) lrradiance 1000 W / m 2, ọnọdụ modulu 25 ° C, AM = 1.5; Ndidi nke Pmax, Voc na Isc niile dị n'ime +/- 5%.
Eserese Production nke ulo oru
Nke gara aga: Gbanyụọ Type Generator
Osote: Trailer Genedị Generator
300 Watt Anyanwụ Mgbakọ
Ogwe Nkata 300w